ပေတံရဲ့ အလေးချိန်၊ ပေတံရဲ့ ဖိစီးမှု | အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Posted on 21 November 2017 by lettwebaw
This entry was posted in Discussion, Love & Marriage, Thoughts, Uplifiting by lettwebaw. Bookmark the permalink.
5 thoughts on “ပေတံရဲ့ အလေးချိန်၊ ပေတံရဲ့ ဖိစီးမှု”
thikkhinemyintoo on 21 November 2017 at 2:20 pm said:
NWE Nwe on 30 November 2017 at 9:46 am said:
lettwebaw on 30 November 2017 at 11:30 am said:
ယူချင်ရင် ယူပါ။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်း မယူပါနဲ့။ ၁၈ လ စောင့်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ပါဦး။ ၁၈ လ ပြည့်လို့မှ ယူချင်သေးတယ်၊ ယူသင့်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ရင် ယူပါလို့ ပြောကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်အပေါ် စွဲလမ်းတပ်မက်တဲ့ မွှန်စိတ်ဟာ သာမန်အားဖြင့် အများဆုံး ၁၈ လ အထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၁၈ လ စောင့်ခိုင်းလိုက်ရင် အဖြေတခု ထွက်လာမယ် ထင်ပါတယ်။
aungmaun on 21 November 2018 at 8:44 pm said:
ကိုကြီးကျော် ၁၈ လဆိုတဲ့အချိန်ဟာသေချာရဲ့လားဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ၇ တန်းတုန်းက အတန်းဖော်မိန်းကလေးကို ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် စွဲလန်းပြီးသတိရနေတာ ဒီနေ့အထိပါပဲ။
lettwebaw on 22 November 2018 at 9:54 am said:
အဲဒါက လွတ်တဲ့ငါးမို့ပါ အူးလေး… 😛